Fantatrao fa te-hiaraka – ka nahoana no tsy handray azy ireo?
Ataovy azo antoka ny biby fiompy dia salama, manokana ny fitsidihana amin'ny vet, ary manavao misy tifitra izay tokony. Misy Hotels izao mitaky fa maneho porofo fa nitifitra ny biby ny firaketana dia amin'izao fotoana izao.
Aza adino ny manome azy ireo ny fitsaboana ny parasy sy ny mifidy ny fitsaboana toy ny faritra sasany dia mety ho feno parasy sy ny ticks. Ny fitsaboana ny heartworm fanafody dia kevitra ny moka satria afaka infect ny biby.
Hijery ny fitaovana: (entana ny biby rehetra zavatra amin'ny kitapo kely iray izay ahafahanao mahazo izany)
A leash sy ny vozon'akanjoko, ny biby tenifototra anarana (enga anie izany misy nomeraon-telefaonina teo amboniny izay olona hamaly, ny finday maro lehibe).
Amin'ny tavoahangy ny rano, ary ny rano lovia (ny tsara fanahy kokoa izay tsy spill)
Ny famatsiana sakafo ny biby, lovia ary angamba ny sotro, ary aza manadino ny itondrany
A biby borosy, Pet Shampoo raha toa ianao dia ho lasa nandritra ny herinandro na mihoatra
Ny kilalao na roa, ary ny zavatra ho azy ireo mba hatory.
Aza manadino ny fanafody:
Tweezers ho any amin'ny fahababoana burrs
Eye fanadiovana nilatsaka
A biby mifehy tena fitaovana (tahaka ny fehikibo fiarovana ho an'ny biby fiompy ihany)
Harona plastika ny maka araka ny biby.
Hiandry ny biby sakafo fanazavana ora maromaro alohan'ny pialanareo ary dia ento ho ela mandeha eo anatrehanao manomboka ny diany.
Ny zavatra voalohany tsapany rehefa mifandray amin'ny fiara aretina dia ny hoe amin'ny 95% ny toe-javatra dia ny adin-tsaina mifandray fa tsy Motion mifandray. Mety hitantara ny biby nanao dia niaraka tamin'ny fiara ho alaina tsy ho azon'ny an-trano voalohany, na ny fitsangatsanganana any amin'ny Vet na ratsy kokoa, ny tarehy ho azy manokana. Izany, ny tsy mahagaga raha manaraka fiara mitety ny tany tokony manoloana tena matanjaka ara-tsaina sy ara-batana manaraka ratra.
Re-biby ny fandaharana ny fihetsika mandeha ao anaty fiara. Raha mba misy valam-pirenena momba ny 5-10 minitra avy any an-trano, Ny tena tsara dia manana olon-kafa koa tao anaty fiara, mba hampitonena ny alika sy hanelingelina azy avy ny dia. Faly foana izy ny lalana ho any amin'ny valan-javaboary. Rehefa tao amin'ny zaridainam-panjakana manao ny mahafinaritra rehetra izay tia ny alika, haka ny baolina, sy nandroaka ny Frisbee. Ny hijanona tao amin'ny valan-javaboahary tsy tokony ho izany no ela…. toy ny mahafinaritra araka izay azo atao. Dia handroaka an-trano ny alika mampitony azy ny lalana an-trano indray, ary rehefa manao be toy ny alika Fuss tahaka ny nataonao teo amin'ny zaridainam-panjakana. Hamita ny fotoam-pivoriana ny sakafo na ny Fifaliana ny fotoana sy ny toe-javatra raha toa fahazoan-dalana.
Izao dia izao ny biby mandeha fiara nifanerasera tamin'ny fotoana nahafinaritra.
Travel eo foana. Tena hevitra tsara tsy mba hiandry ny biby enina ka hatramin'ny valo ora alohan 'ny hanombohan amin'ny dia lavitra. Ny fananana ny kibo noana kosa hanao azy ho azo inoana kokoa fa Mandoa, ary raha izy no harary, tsy misy sakafo ao amin'ny loany, toy izany, fara fahakeliny, dia mora kokoa ny hanadio. Manome ny biby rano, na izany aza, tsy tezitra ny kibony, ary mety hahatonga azy kokoa aina.
Na soraty eo amin'ny ampahefany-tanky. Raha misy mandeha tsara indrindra amin'ny biby fiompy ny kibo noana, ny hafa dia mahazo aina kokoa rehefa avy nihinana ny sakafo kely. Misy biby fiompy mila kely fotsiny eo amin'ny kibony sakafo mba hanampy foana azy ireo tsy hahazo marary.
Raiso sasatra matetika Firam. Raha afaka mamakivaky biby fiompy sasany nandritra ny ora maro nefa tsy olana, ny hafa manomboka mahazo queasy rehefa kilaometatra vitsivitsy. Hahafantatra ny biby sy ny fomba hijanona farafahakeliny isaky ny adiny iray na roa mba haka haingana mandeha mba hanampy ny biby hahazo ny taniny-tongony indray. Tena hevitra tsara ihany koa mba handatsaka rano kely, satria mba tsy ho tahaka ny fisotroana rehefa ny tao anaty fiara.
Aoka izy-anoloan'ny taminy. Tsy misy hetsika betsaka eo amin'ny anoloan'ny fiara toy ny any aoriana, toy izany dia mety manampy ny biby raha aoka izy mitaingina eo amin'ny seza aloha, fa ho azo antoka izy ireo ao amin'ny doggy seatbelt na ny kely izay buckles tarehy ho azy manokana ao an-toerana.
Expand ny faravodilanitra. Biby fiompy, toy ny olona, tsy dia azo inoana fa mba carsick rehefa afaka mijery ny mandalo toerana tsara tarehy.
Crank nidina ny varavarankely. Rivotra madio tsara ho an'ny olona izay mahatsapa ny kely carsick, anisan'izany ny alika na saka, fa tsy manokatra ny varavarankely ampy ka afaka afa-mandositra na hahazo ny lohany làlana.
Andramo fihetsika potion. Dimenhydrinate (Dramamine) — ny zava-mahadomelina toy izany koa ny olona atao mba hiarovan-fiara aretina — miasa ihany koa ho an'ny biby fiompy. Medium ny alika lehibe tokony homena 25 ny 50 miligrama ny Dramamine iray ora, fara fahakeliny alohan'ny lavitra, ny saka sy ny alika kely no tokony hahazo ny 12.5 miligrama. Aza adino ny mijery amin'ny vet vao haneho ny biby misy fanafody vokatra.
MIOMANA NY CAR
mamorona toerana iray ny biby dia afaka soa aman-tsara, ary mitaingina mbola mahita avy teo am-baravarankely, ary ho afaka ny voakasiky ny anao. Nipetraka tao ny am-pofoany raha mitondra fiara ianao dia tsy ny tsara indrindra hevitra. Dia mila mahazo ny rano ihany koa.
Ny bodofotsy na biby malefaka fandriana ho lehibe ka mahatsapa ao an-trano.
Aza hadinoina ny fifehezan-tena fitaovana, tsy mila azy ireo nanidina ny windshield raha tsy maintsy mijanona tampoka.
Raha toa ka ny saka no niara-manao fitoerana teo ho an'ny Kitty fako. Ao ambadiky ny seza anoloana miasa tsara amin'ny fiara sasany. Voalohany manolotra kely plastika (ny fako kitapo hanao).
NITETY FARITANY ETO NY lalambe
Mety ho ny biby dia matory amby sivi-folo isan-jato ny fotoana rehefa tsy mijery ny am-baravarankely, na mahazo biby fiompy avy aminao.
Tokony hampitsahatra rehetra 2 ny 3 ora maro mba hamela Fido haninjitra ny tongony.
Tsy handao an'izy ireny IRERY NY CAR
Modern fiara dia saika rivotra mafy sy ny biby irery ao anaty fiara dia mety ho tsy nahazo ampy rivotra, na voan'ny hafanana. Na dia ny hafanan'ny rivotra ihany 70 degre ny fiara ao amin'ny masoandro afaka mafana be.
Nandritra ny alina IN A Motel
Enga anie ianao nijery ny Pet Travel Internet, ary namandrika ny biby namana an-tserasera hotely na Motel. Raha ny trano fandraisam-bahiny / Motel nasain'i ny biby saran'ny vola izany, tsy miezaka ny hanafina ny biby, dia handany ny alina manontolo manahy mikasika ny nahitana.
Rehefa tonga mangataka efitra iray ambany rihana akaikin'ny toerana izay afaka ny miaraka Fido. Ny foibe kianjan'ny Tsy ny toerana. Aza adino ny haka araka ny biby ka ny trano fandraisam-bahiny / Motel dia hijanona Pet namana.
Ny ankamaroan'ny trano mangataka fa tsy miala ny biby irery ao amin'ny toerana ho an'ny mazava ny antony. Mety ho voatery hanafatra haka na trano fanompoana, na raha toa ka ampy ho tony ny biby mba ho sisa tao anaty fiara noho ny antsasaky ny ora na mba afaka mivoaka ny sakafo, ary nentinao niaraka. Mety hahita ny biby mihitsy aza namana trano fisakafoanana, mitady toerana amin'ny faritra ivelan'ny trano seza toy ny sisin-dalana trano fisotroana kafe.
IANAREO, tonga teo amin'izay halehanao
Asehoy ny biby manodidina ny vaovao an-trano, izay mametraka ny sakafo, rano, ary am-pandriana.
Raha toa ka ny biby dia saka, mampiseho azy ireo ny toerana misy ny fako Kitty boaty. Fido dia mila mahalala izay tokony handeha koa.
Ianao izao vonona ny hankafy ny fialan-tsasatra eo amin'ny orinasa ny namana tsara indrindra.
Online mampiaraka lasa iray amin'ireo fomba malaza indrindra hihaona olona vaovao. Online mampiaraka, toy ny zavatra hafa rehetra, manana ...